waxaa maamula 20-07-16
Tan iyo markii la aasaasay, ICT waxay si guul leh ugu dhoofisay boqolaal nooc oo qalab otomaatig ah iyo tiro aad u badan oo ah agabyada la-dagaallanka faafa si ay uga baxaan daraasiin dalal adduunka ah. Mustaqbalka, ICT waxay la shaqeyn doontaa shirkadaha Shiinaha ee goynta tikniyojiyada si ay u bixiyaan tayo sare, ...
Waa maxay isticmaalka ugu weyn ee mashiinka calaamadaynta Laser?
Mashiinnada Calaamaynta Laser waxay adeegsadaan laambado laser ah si ay u calaameeyaan astaamo joogto ah oo ku yaal dusha sare. Ciyaarta saameynta calaamaduhu waa iyada oo loo marayo walxaha dusha sare ee muuqaalka shay muuqaal ah oo qoto dheer, si qurux badan u naqshadeeya qaababka, astaamaha iyo qoraalka, mashiinka sumadaynta laser inta badan waxaa loo qaybiyaa, mashiinka calaamadaha co2 laser, semicon ...
Hangzhou Intelligent Creative Technology Co., Ltd Kulan
Shirkaddu waxay u qabanqaabisaa adeegyo tababar oo khadka dhexe ah oo loogu talagalay macaamiisha iskaashatada dibada ah. Kooxda injineeriyada ICT waxay bixiyaan talo ku saabsan dhismaha warshad iyo u sameynta qalabka ee la-hawlgalayaasheeda.
Goorma iyo Sidee loo isticmaalaa maaskaro?
waxaa maamula 20-05-12
• Kahor intaadan masool gelin, gacmahaaga ku nadiifi tirtireyaasha alkolada leh ama saabuun iyo biyo. • Ku dabool sankaaga iyo afkaaga maaskaro si aad u xaqiijiso in aysan jirin wax dhimman oo u dhexeeya wejigaaga iyo maaskakarada. • Ka fogow taabashada maaskaro inta lagu gudajiro; hadaad isticmaasho, u isticmaal kareem ku saleysan alkolada ama saabuun iyo biyo inaad ...
Ka ilaalinta naftaada faafitaanka COVID-19
Waad yareyn kartaa fursadahaaga inaad cudurka qaadsiin kartid ama aad ku faafi laheyd COVID-19 adoo qaadan taxadirno fudud: Si joogto ah oo si fiican gacmahaaga ugu nadiifi gacmaha gacmaha ku tirtir alkolada ama ku dhaq saabuun iyo biyo. Sabab? Gacmahaaga ku maydh saabuun iyo biyo ama ku isticmaal xoq alkolo leh oo alkolo leh ayaa dila viru ...